वामशक्ति भन्नासाथ किन आत्तिने ? - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
वामशक्ति भन्नासाथ किन आत्तिने ? - माधवकुमार नेपाल
यतिबेला हामीले हाम्रो विगतको सिंहवालोकन गर्नु, हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्नु, सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल र नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । त्यो सरकारले पनि धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर, सबैलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्र विकासको महाअभियानमा अघि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ ।
अहिले हाम्रो देशले एउटा राजनीतिक आधार पार गरेको छ । हामीले राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेका छौं, गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौं । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । ससमावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गरेका छौं । यी सबै गर्ने क्रममा नै हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेका छौं । हामीले यसबीचमा संविधानसभाको अभ्यास गर्दा अनेक चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । कतै यो अभ्यास असफल हुने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि रहनुप¥यो, तर नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूको बुद्धिमानीपूर्ण प्रयासले गर्दा संविधानसभाको यो अभ्यास नेपालमा सफल भएको छ । कतिपय देशमा संविधानसभाको अभ्यास सफल हुन सकेको थिएन । हामीकहाँ पहिले संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसके पनि दोस्रो संविधानसभले समयभित्र नै संविधान निर्माण ग¥यो । र, अहिले त्यो संविधान कार्यन्वयव गर्दै अघि बढिरहेका छौं । यो वीचमा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई सहज ढंगले व्यवस्थापन ग¥यौं । विश्वले यसको प्रशंसा गरेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै निम्ति अनुभव रहेको छ । यो शान्ति प्रक्रियालाई मूलतः हामीले टुंग्याएको भए पनि अझै सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता परिवारको छानबिन गर्ने आयोगले आफ्नो काम पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पुराना कुराहरूमा अल्मलिरहने होइन । एकता, समझदारी, विश्वासका आधारमा र यसलाई यथोचित सम्बोधन गरेर छिटोभन्दा छिटो यी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि देशको विकासको पहिलो सर्त भनेको दिगो शान्ति हो । दिगो शान्तिको काम हामीले गरेका छौं । शान्तिको आधारशिला तयार गरेका छौं । यसले अब अघि बढ्न सजिलो बनाएको छ ।
विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हो । यसपटकको निर्वाचनमा जनताले बुद्धिमानी ढंगले उचित निर्णय गरेका छन् । अहिले वामशक्तिको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्रादेशिक तह र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । यी सबै निर्वाचनबाट स्वाभाविक रूपमा कुनै एउटा पार्टीले वा कुनै एउटा गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ । जनताले न्यायपूर्ण निर्णय नै गरेका छन् । नेपाली राजनीतिको एउटा विशेष ध्यानमा राख्नुपर्ने के छ भने ००७ सालमा भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसलाई ०४६ को आन्दोलनपछि ०४८ सालमा पनि पहिलो सरकार बनाउने अवसर मिलेको थियो । त्यो सरकार कति उपयुक्त ढंगले चल्न सक्यो, सकेन । लगत्तै पछिको निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो पार्टीको जिम्मेवारी दिने काममा जनताले निर्णय गरे । एमाले नेतृत्वको त्यो अल्पमतको सरकारले दूरगामी महत्वका सबै जनताले प्रशंसा गर्ने काम गरेको हामी सम्झिरहेका छौं । त्यस्तै, किसिमले संविधान निर्माणसँगसँगै नेपाली कांग्रेसले नै सरकार चलाउने मौका पायो । त्यसपश्चात् अहिले भएको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले त्यो जिम्मेवारी पाएका छन् । झन्डै दुई तिहाइ भए पनि वामशक्तिहरूले वा हामी कसैले अहंकार राख्नुहुँदैन । हार्नेले पनि सुरुदेखि नै असहयोग गर्ने अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने काम गर्नुहुँदैन । निराश नै भइहाल्नुहँुदैन । काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । गल्ती गरेका छन् भने आलोचना गर्नुपर्छ । हामीले यस्तै रचनात्मक विपक्षीको अपेक्षा गरेका छौं । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै सत्ता र प्रतिपक्ष हातेमाले गर्दै अघि बढ्नु हो । प्रतिपक्षलाई पनि विरोधीका रूपमा लिइँदैन । गभर्मेन्ट इन वेटिङ पनि भनिन्छ । राम्रा काम गर्दा, राम्रो व्यवहार गर्दा फेरि जनताले अर्को निर्वाचनमा अवश्य ध्यानमा राख्लान् । तर, अहिल्यै नै आत्तिएर सुरुदेखि नै विरोध गर्छु, हनिमुन अवधि मनाउन पनि दिन्नौं भन्ने हो भने त्यसको उल्टो परिणाम आफंैले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै हाम्रा विगतका अनुभव हुन् । यिनलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
हामीले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गर्दै आएका छौं । यसक्रममा धेरै अनुभव पनि हासिल गरेका छौं । अब लडाइ, झगडा, बन्द, हडतालको युग समाप्त भयो । अब शान्तिपूर्ण ढंगले आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने नयाँ चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रूपमा हामीले यो देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा विशेष चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको संविधानमा प्रदान गरिएका अधिकारहरूलाई अरूले पनि प्रशंसा गरेका छन् । यति धेरै अधिकारहरू संसारका अरू देशको संविधानमा छैन । यो संविधानमा विभिन्न पक्षलाई समेट्ने काम गरिएको छ । निर्वाचनको माध्यमबाट संसद होस् वा विभिन्न निकायमा १० वटा समूह बनाएर समावेशिताको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, खस, आर्य, जनजाति वा अपांगता भएकाहरू नै किन नहुन्, यी सबै समुदाय र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पछि परेको समुदाय र क्षेत्रलाई माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ तर सधैंभरि आरक्षणको व्यवस्था हँुदैन । जुन व्यक्ति, समुदायमा आत्वविश्वास हुँदैन, अघि बढेर प्रतिस्पर्धामा सफल हुन्छु भन्ने आँट हुँदैन, त्यो समुदायले यथोचित विकास गर्न सक्दैन । यस अर्थमा नयाँ सरकारले विभिन्न कारणले पछि परेका समुदायलाई अघि बढाउन कसरी सबल र सक्षम बनाउने भन्ने विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । विशेष योजनाका साथ अघि बढियो भने निश्चित समयभित्र सबै समुदायहरू एउटै तहमा आइपुग्न सक्नेछन् ।
हामीलाई विश्वास छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वको यो सरकारले चाँडै पूर्णता पाउनेछ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सरकारको नीति र कार्यक्रमपश्चात् यो सिंगो मुलुक कसरी अघि बढ्छ भन्ने खाका पाउनेछौं । त्यतिबेला सबै पक्षका सोचविचार र अवधारणहरू साथै सबैका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने काममा यो सरकार चुक्दैन भन्ने विश्वास लिएको छु । हाम्रो देश धेरै कारणले पछि परेको छ । त्यसमध्ये पहिलो कारण भनेको हामीमा संकल्पको अभाव हो । देशलाई रूपान्तरण गर्ने आँट, दृष्टिकोण र सक्रियताको कमी रहेको छ । यसले गर्दा हामीमा व्यक्तिवाद र स्वार्थ हावी हुन पुगेको छ । देश जतासुकै जाओस् भन्ने चिन्तनले हामी ग्रस्त भएका छौं । यस्ता चिन्तनको विरुद्धमा यो सरकार दहो गरी अगाडि बढोस् । सुशासनको अनुभूति देओस् । न्यायको अनुभूति देओस् । अन्याय, अत्याचार, दूराचारलाई नसहओस् ।
विकासको अर्को आधार भनेको जनशक्ति हो । जनशक्तिको आधार तयार गर्न योग्य, दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । सक्षम र शिक्षित जनशक्तिले देश विकासको अगुवाइ गर्न सक्छ । विदेशीमाथि हामीले पराश्रित हुनुपर्दैन । नेपालीहरूकै ज्ञान, बुद्धि र क्षमताका आधारमा हामी अघि बढ्न सक्छौं । विकासको अर्को आधार भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । अवश्य पनि यो सरकारले यातायातको विकासलाई उच्चतम महत्व दिनेछ । चाहे त्यो दु्रतमार्ग होस्, चाहे, निजगढ, पोखरा, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा होस् । यी काम समय तोकेर गुणस्तरीय सेवा हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्दै छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने कुरामा ध्यान देओस् । काम रोक्ने भनेको भ्रष्टाचारको जालोले हो । जब त्यो जालोमा जब फसिन्छ, राम्रो सेवा दिन सकिन्न । त्यो जालोलाई तोड्ने काममा यो सरकारले दहो अडान लेओस् । सरकार सञ्चालन गर्दा हातखुट्टा बाँध्ने होइन । हामीकहाँ विभिन्न निकायले हातखुट्टा बाधिदिन्छन् । संसदीय समितिले भन्छ, यति सानो हवाईजहाइ किन ? यो कम्पनीको किन ? यस्ता काम संसदीय समितिको होइन, सरकारले तय गर्ने हो । अख्तियारले यसो गर्नू भनेर निर्देशन दिने होइन । भ्रष्टाचार हेर्ने मात्र हो । बाटो सानो भयो वा ठूलो भयो भन्ने हेर्ने काम अदालतको होइन । देश सफल हुँदा पहिलो प्रशंसा सरकारले नै पाउँछ । असफल हुँदा सरकार नै दोषको भागीदार हुन्छ ।
अब यो देशले कोल्टो फेर्न खोजिरहेको छ । वामशक्तिको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । वामशक्ति भन्नासाथ आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । यो देश अधिनायकवादको दिशामा जाँदैन । वामपन्थीहरूले अधिनायकवादको बाटो समात्दैनन् । अधिनायकवाद आउँछ कि लोकतन्त्र खुम्चिन्छ कि, निर्वाचन नै हुदैन कि, राज्यका सबै निकायमा राजनीतीकरण गर्छन् कि, विरोधी पार्टीलाई पाखा लगाउँछन् कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरत छैन । किनभने, कम्युनिस्टहरू विधिको शासनमा विश्वास गर्छन् । कानुनी शासनमा विश्वास गर्छन् । संस्थागत परिपाटीमा विश्वास गर्छन् ।